It is the EASIEST and financially cheapest option for UN-ICC to just issue the Interpol Arrest Warrant to Min Aung Hlaing for his crimes. ရခိုင် ရဲစခန်းကို ၀င်စီးတဲ့ ကိစ္စကို နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးက လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ တွေးလုံးမျိုး အရင်က မတွေးသူတွေ တွေးလာ ရေးလာကြတယ် | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeIt is the EASIEST and financially cheapest option for UN-ICC to just issue the Interpol Arrest Warrant to Min Aung Hlaing for his crimes. ရခိုင် ရဲစခန်းကို ၀င်စီးတဲ့ ကိစ္စကို နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးက လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ တွေးလုံးမျိုး အရင်က မတွေးသူတွေ တွေးလာ ရေးလာကြတယ်
It is the EASIEST and financially cheapest option for UN-ICC to just issue the Interpol Arrest Warrant to Min Aung Hlaing for his crimes. ရခိုင် ရဲစခန်းကို ၀င်စီးတဲ့ ကိစ္စကို နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးက လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ တွေးလုံးမျိုး အရင်က မတွေးသူတွေ တွေးလာ ရေးလာကြတယ်
January 10, 2017 January 10, 2017 drkokogyi
UN-ICC should issue Interpol Arrest Warrant to Min Aung Hlaing for his crimes… This is the EASIEST and financially cheapest option. He had clearly associated, donated and sponsored Wirathu and Thidagu of Ma Ba Tha. And Ma Ba Tha started the Anti-Islam activities. We could see that very clearly. UN should catch Min Aung Hlaing’s MAN-OUT.
UN-ICC could start the ball…rolling with Min Aung Hlaing. Later his mister-mind puppet master, associates and subordinates could follow as co-accused or Poo_Twe_Tayar_Khans.
Min Aung Hlaing-NLD Gov refusal to allow independent or UN Investigators with delaying tactics and lame excuses clearly shows that they are guilty of atrocities.
ရခိုင် ရဲစခန်းကို ၀င်စီးတဲ့ ကိစ္စကို နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးက လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ တွေးလုံးမျိုး အရင်က မတွေးသူတွေ တွေးလာ ရေးလာကြတယ် …။
( အမြင်မှန်ရလာတယ်ပဲ ထားကြပါစို့လေ … အပြစ်မပြောတော့ပါဘူး )
( ဒေါ်စုက ဒီကိစ္စ နောက်ကွယ်မှာ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိတယ်လို့
ပြောတော့ … အများစုက ပြည်ပက ကုလားအဖွဲ့အစည်းတွေ
ရိုလော်ဘီတွေကိုသာ ချက်ချင်းပြေးမြင်ကြတယ် … ပြည်တွင်းက
လက်မည်းကြီးလို့ ဘယ်သူမှ မပြောခဲ့ကြဘူး … )
ပြည်တွင်းမှာ ၉၆၉ ကို ဘယ်သူတွေ မွေးဖွားပေးခဲ့သလဲ
မဘသ ကို ဘယ်သူတွေ မွေးဖွားပေးခဲ့သလဲ
ဆိုတာ အများစု သိပြီးသားပါ … နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးပေါ့ …
သို့ပေမယ့် မဘသ အားကောင်းလာစေတာကတော့ ကိုယ့် ဘာသာတူခြင်း
တိတ်တိတ်လေး ကြည့်နေလိုက်တာကနေ စတယ် …
တချို့လည်း စဦးကတည်းက ပြောကြရေးကြတာ ရှိပေမယ့် …
တရားဝင် ထုတ်ပြောဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တာ သက်သေတွေ ရှိတယ် …
မဘသ ကို မထမဆုံး တရားဝင် ဆန့်ကျင်သူက ဆရာထင်ပဲ …
စင်မြင့်ထက်ကနေ တလတွန်း စဖိုက်ခဲ့တာပဲ …
ဒါပေမယ့် ထောက်ခံအားပေးသူတွေ ရှိပေမယ့် …
မလုပ်သင့်ဘူး ပြောသူက ပိုများခဲ့တယ် …
ထိပ်တိုက်တွေ့လို့ ဘာအကျိုးရှိမလဲ ဆိုတာမျိုး ရွှေပြည်အေး
တရားမျိုးကိုသာ အများဆုံး ကြားခဲ့ရတယ် …
အဲဒီလို လူထုက နောက်က အားကျိုးမာန်တက် မပါခဲ့လေတော့ …
ဆရာထင် ထောင်ကျတယ် … မဘသ ပို မာန်တက်လာတယ် …
ပို အင်အားကောင်းလာစေခဲ့တယ် …
ဒီကနေ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ ၀ီရမျိုးဆက် တို့ လုပ်နေပုံက
NLD ကို နာမည်ပျက်အောင် လုပ်နေတာပဲ ဆိုတာမျိုး ဝေဖန်လာကြတယ်
နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးရဲ့ စနက်တွေ လို့ ရေးလာကြတယ် …
မှန်ပါတယ် … ဒါကို ဘယ်ဘာသာဝင်မဆို သိကြပါတယ် …
ဒါတွေက သိပြီးသား အကြောင်းအရာတွေမို့ သိပ် အရေးတော့ မပါလှဘူး
အဓိက အရေးကြီးတာကို ထောက်ပြသူ သိပ်နည်းနေသေးတယ် …
ဘာလဲဆိုတော့ အစိုးရကို နာမည်ဖျက်နေသူကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ
ဆိုတာပဲ … ကိုင်တွယ်သင့်သလား မကိုင်တွယ်ဘဲ လွှတ်ထားပေးမလား
ရေးသူနည်းတယ် … မီဒီယာတွေ ဂျာနယ်တွေ နဲ့ ဖေ့ဘုတ်မှာ …
ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာ အင်မတန် အရေးပါတယ်လို့ မြင်သူနည်းနေတာဟာ
တဘက်က လက်မည်းကြီးကို အခွင့်အရေးပေးနေတာ ဖြစ်တယ် …။
တချို့ကလည်း ကုလားတွေ လေနဲ့ ဖောင်းတာကိုသာ အပြစ်ပြန်တင်
ချင်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ် … လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်မှာ NLD အစိုးရ လက်ထက်ထိ
ဘာသာခြားကို မတရားဖိနှိပ်နေတယ် ဆိုတာ ထင်ရှားနေပြီပဲ …
( မတရားမှုတွေကို အရေးမယူသရွေ့ကာလပတ်လုံး … ဒီလို ထင်မြင်ယူဆတာကို အမှားလို့ မပြောအပ်ဘူး … )
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲလမ်းသဘင်တွေကို နှောင့်ယှက်ဟန့်တားတယ် …
ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံတွေကို အရပ်သားတွေ ဘုန်းကြီးတွေက
ခပ်တည်တည် ၀င်စစ်နေတယ် … အမှုအခင်းတခုဖြစ်လာရင် မဆီမဆိုင်
ဘုန်းကြီးတွေက ရှေ့ကရောက်လာပြီ … တရားရေးမှာ ၀င်ဖိအားပေးတယ် …
အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်ရုံသက်သက်နဲ့ ၀န်ထမ်းလုပ်ဖို့ အခက်အခဲ
ဖြစ်လာပြီ … အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်တာသက်သက်နဲ့ နိုင်ငံသားကဒ်
ထုတ်ယူဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲလာတယ် …
ဒါတွေကို အစိုးရသစ် မမြင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ညာတာပဲ ဗျ …
နောက်တချက် ဖြေရှင်းမပေးဘူး ဆိုရင် … လက်မည်းကြီးကပဲ လုပ်လုပ်
ဘယ်သူလုပ်လုပ် … ယေဘုယျ အမြင်မှာ NLD အစိုးရဟာလည်း
ဘာသာခြားအပေါ် အထက်ကအစိုးရများနည်းတူ ဖိနှိပ်နေတယ် လို့
မြင်ကြမှာ အသေအချာပါပဲ …
ရှင်းပါတယ် … ဒီလိုမြင်လို့ မကြိုက်ရင် ဖြေရှင်းပါ …
မဟုတ်ဘဲ မြင်သူကို မကြိုက်ဖြစ်နေရင် … ရူးနေလို့ ပါပဲ …
( တချို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေက သည်းခံကြပါလို့ ရေးကြပြန်တယ် …
ဟောဗျာ ကျနော်တို့က သည်းမခံလို့ ဘာလုပ်လို့များ ရလို့ပါလဲ …
မကျေနပ်ချက်လေးတချို့က ဖေ့ဘုတ်ပေါ် တင်ရေးတာအပြင် ဘာများ
လုပ်မိလို့ပါလဲ … သည်းခံဆိုတာထက်ကို သည်းခံနေရတာပါပဲလေ …
နောက်တချက်က ဒီလောက်မှ မရေး မပြောရင် … ကြာရင် အမှားတွေက
အမှန်ဖြစ် … လူတိုင်းက ဖိနှိပ်ခြင်းကို ပုံမှန်လို့ မြင်ကုန်ကြတော့မယ်လေ … )
Min Thet Naing added3new photos
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဆူပူမူ ဖန်တီးလိုသူ သင်္ကန်းခြုံတစု နှင့်
မျိုးချစ်အစွန်းရောက်များ၏ တမန်တော်နေ့ အခမ်းအနားများကို
အုပ်စုဖွဲ့ လိုက်လံနှောက်ယှက်မူများအပေါ် သူတို့ ပြောစကား(၁)
← “ပဉ္စမ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိဒါန်း”
လူမျိုး၊ဘာသာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု အပါအဝင် လဝကဝန်ထမ်းများ ပြုပြင်ရမည့် အချက် ၃၀ ညွှန်ကြား →
One thought on “It is the EASIEST and financially cheapest option for UN-ICC to just issue the Interpol Arrest Warrant to Min Aung Hlaing for his crimes. ရခိုင် ရဲစခန်းကို ၀င်စီးတဲ့ ကိစ္စကို နောက်ကွယ်က လက်မည်းကြီးက လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ တွေးလုံးမျိုး အရင်က မတွေးသူတွေ တွေးလာ ရေးလာကြတယ်”
Bros and sisters…please do NOT LIKE or share the above IF UR staying inside Myanmar because these are dangerous for you. But spread these ideas to any foreigner: journalists, Embassy officers, UN and INGO officers etc.